Cnc machining ọrụ, CNC machined Parts, nkenke machining - Weldo
Dong Guan Weldo nkenke machining Co., Ltd bụ ihe ISO 9001 gbaara emeputa, e hiwere na 2008. Production saịtị dị na ụwa ama ulo oru obodo-DongGuan. Anyị bụ ndị ọkachamara na NC & CNC machining ọrụ na assemling ọrụ maka OEM na ODM akụkụ. Includedị gụnyere ịtụgharị, egwe ọka, egweri, stampụ, ekwe, ịgbado ọkụ, nkụkọ, ịnwụ na ịpị ihe. Ihe karịrị 6, 000 square mita mmepụta mpaghara na-tinye n'ọrụ na elu mmepụta arụmọrụ na-emepụta nke ọma ruru eru mmiri maka iche iche iche iche nke ọrụ dị ka medi ...
Ahịa anyị dị na Asia, North America na Europe, anyị na-agba mbọ na-amị na-eweta elu àgwà nkenke cnc machining akụkụ na mmiri na ahịa gburugburu ụwa. A na-eji ngwaahịa ndị ahụ eme ihe na ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ semiconductor, ụlọ ọrụ igwe na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwere ndị otu ọkachamara na injinia na ndị ọkachamara nwere ọkaibe, jiri ike na ịnụ ọkụ n'obi anyị niile, lekwasị anya n'inye ndị ahịa ngwaahịa dị elu ma dị elu ka ha wee bụrụ onye gị na ya kwesịrị ntụkwasị obi.
Dongguan Weldo nkenke machining Co., Ltd. bụ onye nrụpụta asambodo ISO 9001.
Mmepụta isi ke okwu ama ulo oru obodo-Dongguan. Anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 6,000 square mita nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe oghere, ọkachamara na nkenke cnc machining ọrụ na nzukọ ọrụ maka OEM na ODM akụkụ.
Chọrọ ịjụ ajụjụ gị gbasara anyị?
Ihe nkuzi anyi obula g’enyere gi aka ime nke a!
Dong Guan Weldo nkenke machining Co., ltd, nke bụ a emeputa ọkachamara na machining akụkụ na ọgaranya n'ichepụta na imewe ahụmahụ.
Western Union, Ego, Gram, Escrow ma ọ bụ Paypal T / T, nnyefe ego.
NgwaahịaNgwaahịa otuto ndị a ma ama
High nkenke Custom CNC machining Aluminium Parts Metal Machine Parts
Omenala-nkenke-CNC-Nkebi nke Igwe-Nhazi-na-ihe-nke-Aluminom
CNC Igwe anaghị agba nchara Nkebi / Igwe anaghị agba nchara Part / igwe anaghị agba nchara mapụtara Parts
Mpaghara Ngwa Ngwaahịa
Ngwaọrụ Nhazi Na-adịkarị
AkụkọNgwaahịa otuto ndị a ma ama
Ngwa nke nkpuchi igwe akpa ipigide ya Pee ...
Njirimara arụmọrụ na ụkpụrụ ọrụ nke njigide electromagnetic nke nnweta ...
Atụmatụ na atụmanya nke nkenke Machinery Parts Proce ...
The nkenke machining ụlọ ọrụ mgbe niile a oru-kpụ ọkụ n'ọnụ, isi obodo-kpụ ọkụ n'ọnụ, na techno ...
Anyị maara na nkenke machining nwere nnukwu chọrọ maka nkenke, nkenke machining nwere goo ...
Njirimara arụmọrụ na ụkpụrụ ọrụ nke njigide electromagnetic nke ngwa nke igwe nkpuchi. Akpa akpa clu ...
The nkenke machining ụlọ ọrụ mgbe niile a oru-kpụ ọkụ n'ọnụ, isi obodo-kpụ ọkụ n'ọnụ, na technology-kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ nwere nnukwu t ...
Anyị maara na nkenke machining nwere nnukwu chọrọ maka nkenke, nkenke machining nwere ezigbo rigidity, elu n'ichepụta nkenke, na accu ...
Mgbe ireỌrụ klas mbụ mgbe erechara ahịa
Anyị bụ ndị a tụkwasịrị obi n'ichepụta soplaya a na ubi ihe karịrị afọ 12, anyị wuru ihe impeccable aha na àgwà, ahịa ọrụ na tinye n'ọrụ ala -of -the-art ngwá
nye ọrụ ntinye maka ngwaahịa zuru ezu